ဒီပို့စ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် ထောက်လှမ်းရေးမှုး 007ပစ်ပစ်က အိုင်ကုနီကို တဂ်လူပ်ပီး တဆင့် စလုံးက တရုတ်မလေး အိုင်ကုနီက ကျနော်ကို တဂ်လိုက်ချင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီတော့ ကိုညီရဲပြောသလို ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းပြီ တော့ အဲလေ ဗျာ။
ဘာလုပ်သလဲဟတ်လား။ စောင်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ထုတ်တယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့ လှုပ်လိုက်တာနဲ့အော်ဖို့ပြင်နေတဲ့ ကြောင်သုံးကောင်ကို ချစ်စနိုးနဲ့ ဆောင့်ကန်လိုက်တယ်။ :D ပြီးမှ ရေချိုးခန်းဝင်ဒယ်...
ကြိုက်တာကတော့ ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်နှင့်ကြက်ဥကြော်.. စားချင်လာပီ..
ဘိုင်ဆတ်ကျရု လို့ခေါ်တဲ့ ထမင်းဖြုနဲ့ဝက်သားကြော်။နေ့တိုင်းတော့ မနက်စာ မစားဖြစ်ဘူး။ အိပ်ရာထ အမြဲနောက်ကျလို့လေ။
လူရှင်းတဲ့နေရာ အိမ်မှာပဲစားစား၊ဆိုင်မှာပဲစားစား လူရှင်းနေမှစားတာများတယ်။အဲတော့ တစ်ယောက်တည်းစားတာပေါ့။တစ်ခါတစ်လေတော့ ချစ်သူနဲ့အတူစားပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ တစ်ယောက်တည်း လူရှင်းတဲ့နေရာမှာ စားပါတယ်။
အခု အစားချင်ဆုံးက အဖွားချက်တဲ့ ဝက်သားခရမ်းချဉ်သီးချက် ကိုတမ်းတနေတယ်။ အဲဒီဟင်းကို ကိုယ်တော်Big နဲ့ ကိုယ်တော် Small အိမ်ပေါ်ရောက်ကတည်းက မစားရတော့တာ အခုထိပါပဲ။နောက်တစ်မျိူးက ပိုက်ပိုက် မရှိစဉ်ကာလက (ခုလဲမရှိပါဘူးး) ) အမေ ချက်တဲ့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်နဲ့ဘဲဥချဉ်ရည်ဟင်းပါ။ အခုတော့ နှစ်မျိုးလုံးစားခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ Both of them are passed away...
တစ်ခွက်။ အဲဒါကလဲ မနက် ဘရိတ်ဖတ်စ် မစားခင်သောက်ရတဲ့ အဆီကျတဲ့ကော်ဖီမစ်ပါ။ ဘာအရသာမှမရှိပါ။ နှာခေါင်းပိတ်၍ သောက်ရသည်။ ကိုယ်ပုံစံက လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယို ဝိတ်တက်တဲ့ပုံဖြစ်နေတာကိုး။။း)
အခန်းမှာ ပဲစားပါတယ်။ထမင်းကိုတော့ ဆိုင်ကဝယ်လာပြီး ကြက်ဥကြော်စားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဥပုပ် စောင့်ပါတယ်.
ငါ ဝိတ်အမြန်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ :D
ကျောင်းသွားရမှာပျင်းလိုက်တာ။ ကျောင်းပြေးရကောင်းမလား ဟု အမြဲတွေးသည်။အလုပ်ပြီး၍ပျော်ကာ စပိန်စကားပြောသင်တန်း သွားဖို့ပျင်းသောခံစားချက် ရှိသည်။
ဖိနပ်ချွတ် ပြီးတော့ ကြောင်တွေကို အစာကျွေးရဒယ်.. မကျွေးရင် အော်တာ နားကိုညီးရော်...
ဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ ထမင်းနဲ့စားဖို့ ကြက်ဥကြော်ရတယ်.. လက်ဖက်ရှိ လက်ဖက်သုပ်တယ်။
လုံးဝဥသုံ မသောက်ပါ။ ကော်ကော် သိပ်မကြိုက်ပါ။
ဘုရားမရှိခိုးပါ။ ချစ်တူနဲ့ဖုန်းပြောတယ်။ပြီးရင် ဖုန်းထဲက ဂိမ်းတွေကိုဆော့တယ်။ (ဖုန်းနှစ်လုံးထဲမှာ ဂိမ်းပေါင်း ၃၀ကျော်ရှိတယ်း)) အဲဒါတွေဆော့လို့ ညောင်းလာရင် အိပ်တယ်.
လပ်တော့ထဲက လေရှုးသုန်သုန်လို ဂန္တာဝင် စာပေတွေကို ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ည ဆိုတာမရှိတော့ဘူး.. နှစ်မျက်နှာပဲ ဖတ်ရသေးတယ်.. အိပ်ချင်လာတော့တာပဲ :P
စိတ်ဓာတ်ကျရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါသထွက်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါက်ကွဲပစ်ဖို့လိုလာပီလေ.. အဲတော့ ဂိမ်းတစ်ခုခုကို Easy ပေးပြီးတော့ ဆော့ပလိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် Counter Strike တို့ condition Zero တို့လို ပစ်ရခတ်ရတဲ့ဂိမ်းတွေပေါ့။ အကုန်ပစ်သတ်ပလိုက်တယ်။ ပြီးရင်တော့ေ၇တစ်ခွက်သောက်လို့ စဉ်းစားကြည့်တယ် ဘာလုပ်သင့်လဲလို့။ တခါတလေကျတော့ ကျနော့် ဘလော့ဂါ အကို နှစ်ဦးကို ရင်ဖွင့်ပါတယ်။
ဖုန်း၊ ပိုက်ဆံအတ်၊ အိမ်သော့ (အကုန်လုံးခဏ ခဏမေ့ပါတယ်) အိမ်သော့က အထူးသဖြင့်မေ့ပါတယ်.. :P
စလုံးက တရုတ်မလေး အိုင်ကုနီ လိုလဲ နားကြပ်လဲပါတယ်နော်..
ကျနော့် ချစ်တဲ့သူတွေက ဒီလောကထဲမှာ မရှိတော့ပါဘူး.. ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ ပုံမှန်ပဲသဘောထားပါတယ်။ :D
တားရှစ်တူပေါ့ဗျာ.. ပြီးတော့ ဘလော့ဂါ အကိုတစ်ယောက်.. ဒါပါပဲ..
အလုပ်ထဲမှာဆိုတော့ တူတူလုပ်နေတဲ့ ရှစ်တူ ပေါ့ဗျာ.. သွပ် သွပ် သွပ် (ပေါလိုက်တာ). :D
ကျနော့် ပစ္စည်းပေါ့ဗျာ (အဲလေ) ချစ်သူက ကျနော့် မွေးနေ့မှာ ဝယ်ပေးတဲ့ဖုန်း...
လက်ဆောငသိပ်မရဖူးပါဘူး.. ချစ်သူပေးတာကလွဲလို့။ နောက်အကိုတစ်ယောက်ပေးထားတာ တစ်ခုပေါ့။ အကြိုက်ဆုံးက အပေါ်ကပြောထားတဲ့ဖုန်းလေးပါပဲ။
အမေရှိရင်တော့ အမေပေါ့။ အမေလဲ မရှိတော့၊ အဖွားလဲ မရှိတော့၊ အခုထိ အဲလိုလူမျိုးကို မတွေ့မိသေးပါခင်ဗျာ။ ကျနော်က ငယ်သေးတော့ နောက်ကျတော့များ တွေ့ကောင်းတွေ့မိပါရဲ့ဗျာ...
လူတော်တော် များများရှိတဲ့ ဆန္ဓမျိုးပါပဲ ..
အကိုရေးပြီးသွားပါပီ။ တဂ်ပို့စ်ရေးရတာ ပျော်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို သတိတရ တဂ် လုပ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွဋ် at Saturday, January 07, 2012
က ကြောင်မျိုး၊ကြောင်လတ်နဲ့ ကြောင်ဖြိုးလား.....:D
တား ၈2 ဖတ်ရင်တော့ ပျော်သွားမှာပဲ
ရေးမှရေးပါ့မလားလို့... ကိုထွဋ်ရေးရင် ရီရမယ်ဆိုတာ သိတယ်.. ဟိဟိဟိ...
မနက်နိုးကတည်းက ညင်ညင်သာသာပဲ... ကြောက်လိုက်တာ :P
င့ါညီက တယ်ဟုတ်ပါလား ကြောင်သုံးကောင်နဲ့ အတူတူ အိပ်တယ်ပေါ့... ကြောင်မလေးတွေလား ညီထွဋ်... ဟဲ... စတာနော် ညီ... ထီပေါက်ပါစေလို့ အစ်ကို ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ညီရေ...
သြော်.. ဘကြီးထွဋ်ကတော့ ကြောင်ဖြူများရှင်နဲ့တွေ့ရင်တော့ သူကြောင်တွေ ကန်ရကောင်းလားဆို ပြသနာတက်တော့မှာပဲ..... :) အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေလို့ အလည်ခုမှ လာဖြစ်တော့တယ် ဘကြီးရေ...
မင်းဝိတ်တွေ ငါ့ဆီပို့လိုက်စမ်းဘာာ လိုချင်လွန်းလို့း)))
စလုံးက တရုတ်မလေးပေါ့လေ ဟဟားး
အကိုရဲ့ အိပ်ပျော်ဆေးလေး သဘောကျတယ် :P:P
ထီပေါက်ရင် ညီမလေးကိုလဲ သတိရပါနော်အကို...:):)
ဘလက်ရို့ဇ်ရေ.. ချစ်တူ ဆိုတာ သံရိုက်ရင် သုံးတဲ့ ဆိတ်ဂျိုတူထက် အများကြီးဆိုးပါတယ်.. ၂၄နာရီရှိ ၁၆နာရီ စောင့်ကြည့်နေတဲ့တူပေါ့ကွယ်.. ရှစ်နာရီက အိပ်နေလို့.. :P
ရှိရင်တော့ တိမှာပါ.. :D